Raha toa moa ka ... tapitra : comments » What if ...
Friday, February 11, 2011 - 20:06:24
Jereo fa mety ho tsara ilay openVPN. http://openvpn.net
Ny eto Italia ohatra dia voasaka ny torrentbay.com (io ihany ny torrent sakanandry zalahy) dia rehefa te hi-telecharger film na zavatra ao amin’ny torrentbay aho dia mampiasa ny openVPN dia miova ny ip-ko, lasa ip-n’ny serveur izay misy an’ilay openvpn. Dia mandeha indray ilay torrentbay.
Misy tetezamita ihany nefa izany ilay connexion ka tsy fantatra hoe firy isanjato ny lany eo ampanidinana
Saturday, February 12, 2011 - 08:04:51
Ie, ny resaka telechargement aloha mahita fika foana e, toy izany koa ny site bloqué. Fa ny hoe accessible avy any ivelan’ny trano ny solosaina ato an-trano no tsy nahitako fika, ilay resaka VNC io. Ilay ohatra aho hoe any amin’ny cyber any dia te hanokatra ny machineko aty an-trano haka dossier iray ohatra na hi-upload vidaka na ohatr’izany.
Raha toa moa ka ... mandady mihemotra »
« Raha toa moa ka ... saika tapaka